Ukufumana iBhlog yakho "kuluhlu-lwe-" | Martech Zone
NgoLwesine, Agasti 17, 2006 NgoLwesibini, Oktobha 4, 2011 Douglas Karr
Kulungile, ngoku ndinayo apha, sukuphambana uhambe. Mamela endikuxelela kona.
Kukho ilangatye elihamba kwi-blogosphere okwangoku kwi-blog kaNicholas Carr, Okungafundwanga. UShell uSirayeli ikwimpikiswano, njengetoni yezinye iiblogger (umzekelo).
Kuya kufuneka ufunde iposti epheleleyo kaMnu Carr ngaphambi kokufunda le ndiyithethayo. Ndiyathemba ukuba ndiwudlulisa umyalezo wakhe ngokufanelekileyo… Ndicinga ukuba le nto ayithethayo yeyokuba bambalwa abalungileyo kakhulu ku "A-Uluhlu" lweebhlogi ekufuneka wonke umntu aphose itawuli.
Ukuba ufuna ukufikelela ku "Uluhlu lwe-A" lwebhlog, okokuqala kufuneka uqonde ukuba loluphi olo luhlu. Ixhomekeke kuwe… hayi uNick Carr, hayi iTechnorati, hayi uGoogle, hayi uYahoo!, Hayi iTypepad okanye iWindowsPress. "Uluhlu oluluhlu" aluchazwanga linani lokubetha olifumanayo, ivolumu yokujonga iphepha, amabhaso owafumeneyo okanye isixa seedola kwiakhawunti yakho ye-adsense. Ukuba kunjalo, unokuba ubhloga ngenxa yezizathu ezingalunganga.
Wamkelekile kwiDouglaskarr.com, enye yeZinto eziNgafundwanga eziKhulu. (Kulungile, mhlawumbi akunjalo kakhulu)
Umcimbi 'sisikolo esidala' sentengiso yemithombo yeendaba. Lo mthetho uthi ii-eyeballs ezininzi zibona intengiso yakho, kokukhona ulungile. Isikolo esidala sithi ukuba ufumana amakhulu amawaka okujonga iphepha, uyimpumelelo. Kwikhulu elinambini kwaye kuya kufuneka usilele. Uyinxalenye yokuNgafundwanga okuKhulu. Ngokuchanekileyo kukucinga okufanayo okurhuqa phantsi uMzi mveliso weeMovie, uMzi-mveliso wamaphephandaba kunye noNxibelelwano lweTV. Ingxaki kukuba uhlawula ixabiso elikhulu kulawo mabhola, ngaphandle kokubuyisa. Ingxaki awuyidingi yonke loo mijelo yamehlo, kufuneka nje ufumane intengiso yakho kwii-eyeballs ezilungileyo.
"Uluhlu lwam" aluhambelani noSeth Godin's, Tom Peter's, Technorati's, Shel Israel, okanye Nick Carr's. Andifuni bafundi abasisigidi. Ngokuqinisekileyo, ndiyavuya njengoko izibalo zam ziqhubeka zikhula. Ewe ndifuna ukukhulisa ukufundwa kunye nokugcinwa kwabafundi kwibhlog yam. Kodwa ndinomdla kuphela kubantu abaneengxaki ezifanayo kwaye bajonge izisombululo ezifanayo nezam.
Ndiyi-quasi-yokuthengisa-itekhnoloji-ye-geek-yamaKrestu-utata oyindoda ohlala eIndiana. Andizukufudukela eNew York okanye eSan Francisco. Andijonganga ukuba sisityebi (kodwa andizukukhalaza ukuba ndenza njalo!). Ndinxibelelana neqela lezentengiso kunye neetekhnoloji kwi-Indianapolis nakwiindawo ezikufutshane. Ndifunda kwaye ndibhengeza ukubhloga 'kubantu bam' (bonke abantu abambalwa okanye njalo!). Kwaye ndabelana ngamava am, iingcinga zam, imibuzo yam, kunye nolwazi lwam nabantu abaninzi abanomdla.
Uyabona, xa ndifumana uluvo oluvela kwaShel Israel, uTom Morris, uPat Coyle, usapho lwam, abahlobo, okanye abanye abantu endibahloniphayo nababelana nabo… sendisele ndenza u "Uluhlu A". Ukuba ayingombono wakho woluhlu oluluhlu, kulungile. Mhlawumbi andifuni ukuba kokwakho. Sonke siyibona impumelelo ngokwahlukileyo.
Aug 17, 2006 ngo-10:09 PM
ndicinga ukuba utsho ngokugqibeleleyo. abantu kufuneka balinganise iinjongo zabo ukuba kukho izinto abazilindeleyo. bakuba befikelele kuloo nto, ukuya kumngeni olandelayo.
Aug 17, 2006 ngo-10:40 PM
Indlela yokuhamba - uvume ngokupheleleyo.
Ndiye ndaphuhla ingcinga ezimbalwa kweli yelenqe lika-A ngokwam.
Umbulelo omkhulu kwi "quasi-marketing-technology-geek-Christian-father dude" bit, btw. Nam ndandinokuzichaza ngendlela efanayo!
Agasti 18, 2006 kwi-3: 52 AM
Inkcazo enkulu kunye ne-grwat post. Ndiza kudibanisa. Enkosi
Agasti 18, 2006 kwi-6: 34 AM
Yaye khumbula, uYesu washumayela kumawaka, kodwa waqeqesha abali-12 kuphela. Kwaye abo balishumi elinesibini babethembekile. Kwaye jonga apho iye khona!!